News - Astaamaha lagu yaqaan dabaqa dhabta ah ee alwaax
Dabaqa dhabta ah ee alwaaxa waa ka shaqaynta ka dib marka si toos ah loo jaro alwaax dabiici ah oo noqda, lagu ilaaliyo qaabka qurxinta leh alwaax adag oo dabiici ah oo dabiici ah gebi ahaanba, sababtoo ah uma isticmaalin wakiilka koolada si loo barbardhigo ilaalinta deegaanka guud ahaan sidaas. Dabaqa dhabta ah ee alwaaxa wuxuu ubaahan yahay in la dhigo keel markii si caadi ah loo rakibayo, ku dar taatikada qoryaha dhabta lafteeda lafteeda ayaa sidoo kale kafiican, sidaa darteed dareenka curadka ee sagxadda dhabta ah waa mid aad u wanaagsan.
Dabaqa alwaaxda dhabta ah ayaa ka jilicsan isticmaalka, haddii uu yahay alwaax xun, jawiga oo aad u qalalan ama aad u qoyan ayaa ka dhigi kara jajabkiisa. Darajadiisa duugista ah ee iska caabinta ayaa sidoo kale ka hooseysa, ma jiidi karto alaabta gurigeeda, waxay fiicnaan lahayd sidoo kale kabaha ha ku xirin banaanka si aad ugu tagto dabaqa dhabta ah ee alwaax si aad uhesho, u yeelatid labiskiisa sidaas. Si loo ilaaliyo dusha sare ee dusha sare ee dusha sare ee alwaaxda waa mid dhalaalaya, ka fiicnaa 3 bilood ama wax ku dhuftay wax.
Faa'iidada dabaqa alwaaxda dhabta ah
Nalalka codka iyo kuleylka
Qalabka dhulka ka samaysan ee alwaax adag waa mid adag, taxaddar leh qaab dhismeedka alwaaxda, habdhaqanka kuleylka oo hooseeya, xannibaadda codka iyo saameynta kuleylka, wuxuu ka fiican yahay sibidhka, lebenka dhoobada iyo birta. Sababtoo ah dabaqan alwaaxda ah wuxuu leeyahay cod-nuugis, daboolida dhawaaqa, wuxuu yareeyaa cadaadiska codka, gaabiyaa shaqada waqtiga maqalka ee haraaga ah, wuxuu yareeyaa saameynta wasakheynta ee dhawaqa waxyeelada dadweynaha.
Isku hagaaji qoyaanka
Astaamaha looxa alwaax ee sagxada dhabta ah ee alwaaxa waa, cimilada oo qalalan, qoyaan sii deynta gudaha alwaax; Cimilada qoyan, qoryaha ayaa ka dhuuqa qoyaanka hawada. Dabaqa alwaaxa wuxuu soo nuugaa oo sii daayaa qoyaanka, maxaa yeelay dabaqa alwaaxa ayaa si toos ah u hagaajin kara heerkulka gudaha, qoyaanka si otomaatig ah, wuxuu yareyn karaa dhacdada cudurka laabotooyinka, iyo sababtoo ah isku dheelitirkiisa kuleylka kuleylka waa yar yahay, waxay leeyihiin saameynta jiilaalka diiran iyo xagaaga qabow (saameynta ilaalinta kuleylka waa aad u fiican). Macno malahan sanadka oo dhan waqti kasta, haddii qofku uu fadhiisto dusha sare ee alwaax, wuxuu dareemi karaa raaxo aad u badan, ma yeelan doono qabow, dareemo qabow, gaar ahaan qoyska ilmaha ku leh guriga. Daraasado cilmiyaysan ayaa muujiyey in nolosha muddada dheer ee guryaha alwaaxda ahi ay cimriga ku dheereyn karto celcelis ahaan 10 sano.
Kuleylka jiilaalka iyo kuleylka xagaaga
Xilliga jiilaalka, heerkulka dusha sare ee sagxadda qoryaha adag waa 8 ℃ ~ 10 ℃ ka sarreeya ta dhoobada dhoobada ah, dadkuna waxay ku socdaan dabaqa qoryaha iyaga oo aan qabow dareemin; Xagaaga, heerkulka qolka jiifka ee alwaaxda dhabta ah waa inuu ka hooseeyaa heerkulka qolka dhoobada dhoobada ah ee la dhigo 2 ℃ ~ 3 ℃.
Cagaar aan dhib lahayn
Dabaqa dhabta ah ee alwaaxa waxaa laga soo qaadaa keynta aasaasiga ah ee walxaha leh, isticmaal dusha rinjiga u adkeysta ee aan lahayn galmo kacsan, dhir ka sameys walxaha rinjiga dhammaan cagaaran oo aan waxyeello lahayn, ha u ekaan dhoobada dhoobada ah ee leh shucaac, sidoo kale uma eka aggrandizement sagxada si loo helo formaldehyde, waa cagaar dabiici ah oo aan dhismooyin dhisme lahayn.
Waqtiga boostada: Dec-29-2020